CoSchedule: Kalandarka Tifaftirka iyo Daabacaada Bulshada ee WordPress | Martech Zone
Sabti, Febraayo 15, 2014 Sabti, Febraayo 15, 2014 Douglas Karr
Wow… kaliya waaye. Waan ka akhristay CoScedule dhowr bilood ka hor ugu dambayntiina wakhti ayaa la helay si loogu saxeexo tijaabada loona siiyo tijaabo tijaabo ah. Gebi ahaanba plugin aad u fiican oo leh awoodo badan oo badan oo aan maleeyay.
Awoodda aad ku eegto bartaada WordPress iyadoo leh jadwalka tifaftirka ee qoraalada hore ayaa loo qabtay, xitaa iyada oo la jiidayo iyo hoos loo dhigayo awoodaha. CoSchedule wuxuu qaadanayaa jadwalka tifaftirka illaa heer gebi ahaanba cusub, in kastoo. Halkii ay jadwalka si fudud uga dhigi lahaayeen aragti, dhab ahaantii waxay sameeyeen is-dhexgal dhammaan adeegsadaha soo saarista waxyaabaha ku jira bartaada iyo sidoo kale wadaagga bulshada.
Waa kuwan qaababka aan gabi ahaanba jeclahay:
Dhiirigelinta Bulshada Mustaqbalka - waxaa jira waxyaabo fara badan oo ku saabsan dhiirrigelinta bulshada, oo ay ku jiraan awoodda Jetpack si loo faafiyo qoraalada dhammaan dariiqyada bulshada. CoSchedule waxay ku qaadataa dhawr darajo in kastoo ay awood u leedahay inay daabacdo kor u qaadista bulshada maalmaha soo socda, toddobaadyada ama bilaha!
Muraayad qabyo ah - waxaad u maleyn kartaa inaan ahay lowska, laakiin waxaan hayaa ilaa 30 qoraal oo kujira balooggeyga hada. Maaha inaan iyaga illaaway, mararka qaarkood waxaan la xiriiraa shirkadda aan u qorayo wixii macluumaad dheeri ah. Mararka qaar waan ilaawaa inaan haysto qabyo fara badan… laakiin Kalandarka CoSchedule wuxuu leeyahay dhinac dhinac u muuqda oo ku qoraya qoraaladaada oo dhan markaad xoqdo. Kadib waad jiidi kartaa oo aad ku ridi kartaa boostada jadwalka taariikhda markaad rabto inaad daabacdo!
Meeleynta Kooxda - bilaw boostada cusub ee jadwalka waxaadna u xilsaari kartaa mid ka mid ah qorayaashaada, habka ugu wanaagsan ee aad ku maareyn karto kooxdaada una hubiso inaad kahelayso qoraal isu dheelitiran oo qof walba (ama mawduuc qof gaar ah) rajada laga qabo taariikhda daabacaadda!
Isdhexgalka - Aan xuduud lahayn Kaydka isdhexgalka iyo sidoo kale Bitly URL gaabin, Google Analytics ee raad raaca ololaha, Falanqaynta Gaarka ah (haddii aad wado wax sida Webtrends ama Site Galiye), iyo xitaa isdhexgalka Google Calendar si aad ugu eegto qoraaladaada jadwalkaaga!
Tags: wax yarbufferraadinta ololahaisjiidjiidjadwalka googleololaha googledaabacaadda bulshadawordpress daabacaadda bulshada